Kukhalwa ngolayinie-Home Affairs | News24
Kukhalwa ngolayinie-Home Affairs
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaUlayini omude eMnyangweni wezaseKhaya ngoLwesibili.
NAKUBA ukuhamba kukagesi kusathe ukuma kodwa loko akuzange kusize ekutheni kunciphe olayini eMnyangweni wazeseKhaya ehhovisi eliseMgungundlovu njengoba amanye amalunga omphakathi echitha isikhathi eside kolayini ngaphambi kokuba athole usizo .
NgoLwesibili mhla zingama-26 kuNdasa ( March) ulayini wabantu abebeshaye ujenga ngaphandle kulamahhovisi ubuqala khona uyojika ngomgwaqo uChapel Street uze ucishe uyofika emgwaqeni uPietermaritz Street.
Abantu bakhala ngokuthi abazi ukuthi yini eyenza ukuthi olayini bahambe kancane ekubeni kuthiwa kukhona abasebenzi.
Abanye baveze ukuthi besekungokwesibili befika kulamahhovisi njengoba ngoMsombuluko bafika kodwa batshelwa ukuthi imishini ayisebenzi i-offline base bephoqeleka ukuba babuyele emakhaya.
Elinye ilunga lomphakathi elikhulume ne-Echo ngoLwesibili lithe lifike kulamahhovisi ngehora lesithupha ekuseni kodwa kuze kwashaya ihora lesithathu ntambama lisame ngaphandle kulayini omude lingakalutholi usizo .
“Nayizolo [ngoMsombuluko] bengilapha ngabuyela emuva ngingazange ngiluthole usizo ngoba kuthiwa imishini ayisebenzi ngibuyile namhlanje kodwa futhi ngiyabona ukuthi ngizophinde ngibuyele emuva ngingalutholanga usizo. Ukube nginayo enye indlela angabe angisezi nhlobo lana kodwa alikho elinye ihhovisi elingangisiza ukuphela kwalo leli. Izingane kufanele zibathole omazisi ukuze bezokwazi futhi ukuthi babhalise nasezikoleni futhi sekusondele nesikhathi sokuvota kumele bavote,” kubeka yena.
USamkelisiwe Ndlovu waseMbali yena uthe ufike kulamahhovisi ngokugamanxa kwehora lokuqala entathakusa ngoLwesibili kodwa naye ubhekane nenkinga yokuqhinqa kuyaliyini engalutholi usizo.
Uthe ngesikhathi ebhalisa ebhukwini ubengowesithathu kodwa uthe esefika ngaphakathi wabe esenikezwa inombolo ekhombisa ukuthi uwunombolo-33 nathi akazi ukuthi kwenzeka kanjani.
“Mina ngiqashe imoto ukuba ingilethe lapha ekuseni ngovivi ngoba bengifuna ukuthi ngisheshe ngiqede kodwa kuyafana nje ngoba akusebenzanga naloko ngigcine sengichitha usuku lonke lana kule ndawo. Kunabantu abafike ngaphambi kwami lapha kodwa nabo bahlale kwaze kwashona ilanga.
“Into esicasula kakhulu ukuthi kunabantu abavele bafike ngemuva kwethu kodwa kube ibona abathola kuqala usizo ekubeni thina sisuke sifike ekuseni saqhuqhwa[amakhaza]. Uma ngabe sibuza imenenja ukuthi abantu abanjani abangawubambi ulayini usitshela ukuthi kumele kuqale kusetshenzwe izihlobo zalabo abasebenza ngaphakathi ngaphambi kokuba kusetshenzwe amalunga omphakathi ekubeni thina sisuke sivuke ngovivi ukuzothola usizo kule ndawo,” kubeka yena.
Elinye ilunga lomphakathi ebelizokwenza umazisi oyikhadi liphinde lenzele indodana yalo eneminyaka eli-16 umazisi wayo wokuqala uthe abajabulile ngendlela leli hhovisi elisebenza ngayo.
“Sengichithe usuku lonke ngihleli lana ngingalutholi usizo.Indodana yami ibijabulile ukuthi izothola umazisi wayo wokuqala kodwa manje ithi yona ayifuni ukubuye iphinde ubuyele lana ngenxa yesimo esiyiyona.
“Into ebuhlungu ukuthi ngisho kungathiwa kushaya isikhathi sokhuthi bavalwe wena usungaphakathi usuthole nenombolo yakho kodwa uma usubuya ngosuku olulandelayo kuzomele uqale phansi ulayini,” kubeka yena.
Olayini bebehlukaniswe kabili kukhona owabazolanda nabazoshaya omazisi ,kodwa bobabili labo layini bebebade.
Imenenja yakuleli hhovisi uMnu Xolani Maphumulo uthe akusilona iqiniso ukuthi kunabantu abeqiswa ulayini. Uthe inkinga enkulu ababhekana nayo ukuthi amalunga omphakathi avele anqume ukuza kulamahhovisi ngesikhathi esisodwa nokuyisikhathi sokuvalwa kwezikole.
“Akusilona leli hhovisi kuphela elinenkinga yolayini abade ngoba bonke abantu bavele bakhethe ukuza emahhovisi uma ngabe kuvalwe izikole ukuzokwenzela izingane omazisi kanti loko kwenza ukuba olayini babe bade kakhulu.
“Siyazama ngayo yonke indlela ukusiza umphakathi ngoba sisebenza ngisho sesidlulile isikhathi somsebenzi kodwa siyazinikela sisebenze ukusiza umphakathi,”kubeka yena. UMnu Maphumulo uvumile ukuthi ngoMsombuluko imishini yabo ibingasebenzi kodwa wathi uma ngabe seyibuyile benza isiqiniseko sokuthi bayaqhubeka nomsebenzi ukuze kuzosizakala abantu. Uthe nangesonto eledlule kube nezinsuku ezimbili lapho imishini yabo ibingasebenzi.
“Uma ngabe imishini yethu ingasebenzi ngisho kungathiwa ihora elilodwa loko kusillimaza kakhulu thina ngoba kusho ukuthi ulayini uzoma angeke uze uhambe. Siyabakhuthaza abantu ukuba bangalindi ukuba kuze kube amaholidi ukuzokwenzela izingane zabo ezifundayo omazisi. Kunohlelo esinalo ukuthi uma ngabe umfundi efikile ezokwenza umazisi efake umfaniswano wesikole siqala ngaye ukuze ezokwazi ukuba aphuthume esikoleni. Abantu abakusebenzise loko ukuze sizogwema lenkinga yolayini abade njalo ngamaholidi,” ephetha.